Factory Coins Challenge - Mpanamboatra sy mpamatsy vola ny China Challenge
Raiso ireo vola natokana ho azy amin'ny vidin'ny fifaninanana misy sanda ambony Ny farantsakely fanamby tsirairay dia manana endrika tsy manam-paharoa izay an'ny fikambanana soloany, toy ny sampana miaramila, vondrona tsirairay, vondrona manokana ary na dia iraka manokana aza. Ny mpikambana ao amin'ny serivisy dia fantatra fa mamorona tahirim-bolam-pitsarana fanamby mandritra ny fotoana maha-miaramila azy ireo. Mahatsapa ho avonavona sy fahatsapana ny maha-izy azy izy ireo rehefa mampiseho ireo farantsak'izy ireo isan-karazany. Hatramin'ny 1984, ny orinasanay dia namatsy vola sandoka miaramila an-tapitrisany miaraka amin'ny fahafaham-po 100%, ny anjarantsika dia mizara 90% amin'ny tsena Eoropeana sy Etazonia. Ny vola madinika fanamby dia namboarina tanteraka mifanaraka amin'ny famaritana marina anao. Ho an'ny tena famolavolana endrika, azonao atao ny misafidy vola tokana na roa miaraka amin'ny loko amin'ny lafiny roa na roa. Raha manana hevitra tianao hosedraina ianao, zarao aminay, miara-miasa aminao izahay mba hahazoana antoka fa ny volavolanao no tadiavinao! fepetra arahana ● Fitaovana: firaka zinc, varahina, landy vita amin'ny volo ● Haben'ny mahazatra: 38mm / 42mm / 45mm / 50mm ● Loko: enamel henjana sarotra, enamel malemy na tsy misy loko ● Vita: mamirapiratra / matte / fahagola, tononkira roa na fitaratry ny fitaratra, poloney 3 ● Tsy misy fetra MOQ ● fonosana: kitapo miboiboika, paosy PVC, boaty volory vetaveta, boaty taratasy, fijoroana farantsakely, tombony azo
Vola maty vonoina
Ny lanjan-taratasy miaraka amin'ny Embed Coin
Vola enzim-bola enamel
Vola farak'i GEO
Mijoro ny vola madinika